Izikhali ZikaNkulunkulu: Izingxenye Ezi-6 Zichaziwe Futhi Zisho?
Uyazi Izikhali zikaNkulunkulu?
Njengasempini, lapho amasosha edinga izikhali ezikhethekile ezifana nama-bulletproof vests, izigqoko zokuvikela ikhanda, izikhali nezinye izinto ezisetshenziswayo.
En el mundo ngokomoya, sidinga nesivikelo esisivikelayo futhi esisisize sibhekane nazo zonke izingqinamba ezingase zivele empilweni.
Ezwini likaNkulunkulu, ikakhulukazi esahlukweni sokugcina sabase-Efesu, enye yezincwadi ezabhalwa nguMphostoli uPaul, yeluleka wonke amakholwa ukuthi asebenzise izikhali zikaNkulunkulu ukulwa nomubi futhi akwazi ukunqoba.
Umhlaba wokomoya usempini engapheliyo yingakho kumele sizilungiselele ngaso sonke isikhathi.
1 Izindlela zendlela kaNkulunkulu
1.1 1: Ibhande leqiniso
1.2 2: Isivikelo sesifuba sobulungiswa.
1.4 4: Isihlangu sokukholwa engalweni kaNkulunkulu
1.5 5: Isigqoko sokuzivikela sensindiso e-Armor of God
1.6 6: Inkemba yoMoya Engalweni kaNkulunkulu
Izindlela zendlela kaNkulunkulu
Le nsimbi ifaka uchungechunge lwezinto ezisetshenziswa ngokomoya, ukuze wazi ukuthi uzisebenzisa kanjani, kufanele wazi ukuthi zisetshenziswa kanjani yingakho manje sikutshela konke okudingeka wazi ukuze uzivikele ngengubo yokomoya.
1: Ibhande leqiniso
Ibhande leqiniso liqanjwe ku-Efesu 6:14. Ngomzimba nangezikhathi zakudala, amasosha ayegqoka ibhande ukuze i-tunic ihlale iqinile ngenkathi isekela umzimba.
Ngomqondo ongokomoya, ibhande liba yilolo lwazi nokuvikeleka okusenza sime siqine, sikholwe ukuthi siyikho amadodana kankulunkulu, yize omubi efuna ukusikholisa ngenye indlela.
Ukuze sisebenzise kahle ibhande leqiniso inhliziyo zethu kumele zigcwaliswe yizwi leNkosi kumele siziqinise ngomkhuleko. Kufanele siphile impilo ephelele futhi eqinile ngendlela kaKristu.
2: Isivikelo sesifuba sobulungiswa.
Njengoba nje ezikhathini zasendulo kwakukhona izembatho zempi, okwakambozwa ngazo izitho zangaphakathi, njengoba manje sazi njengevolletproof vest.
Amasosha ahamba ezweni lokomoya kudingeka agweme izinhliziyo zethu ekuhlaselweni yizitha zonke.
Isivikelo sesifuba sobulungiswa siba yisembozo esisinikezayo ubulungiswa ukuthi sifinyelela ngoJesu futhi umhlatshelo asenzela wona yisiphambano seKalvari.
Ukuyisebenzisa ngendlela efanele kufanele sikhumbule ukuthi singobani kuKristu, sinanzelele ukuthi sibonga umhlatshelo wakhe ukuthi siyalungisiswa phambi kobaba osezulwini.
Ngeke sikholwe ukuthi isitha sitsheleni noma simangalela noma sikhumbula impilo yethu edlule noma izono zethu.
Lawo ngamasu omubi ukusilimaza futhi isivikelo sesifuba sobulungiswa kuphela esivikela kulokhu kuhlaselwa.
Njalo iqhawe lidinga ukuvikela izinyawo zalo ekuhlaselweni ngoba nalokhu kuyilitshe elibalulekile lesitha.
Uma isosha lingaqinile ekuhambeni kwalo, kulula ukukulisusa. Amasosha kufanele athathe izinyathelo eziqinile nezphephile, ngaphandle kokungabaza noma ukwesaba.
Izicucu zevangeli kumele zigqokwe ngokuphepha, wethembe lokho iNkosi ekuphe kona, uhlale uqinile endleleni.
Zigcwalise ngokuthula, injabulo nothando futhi uvumele lokhu ukuba kusabalale kulabo abasondele kuwe. Ucingo lukushumayela iVangeli kuso sonke isidalwa.
Izinyathelo eziphephile ezihlala zibukele ukuthi zingagxili kunoma iyiphi imayini noma enye into ebukhali isitha esingayishiya endleleni. Ukuqhubekela phambili njalo futhi ungasekeli emuva, ukhula embusweni kaNkulunkulu.
4: Isihlangu sokukholwa engalweni kaNkulunkulu
Lapha umphostoli uPawulu usishiya ngemiyalo yokusetshenziswa kwesihlangu sokukholwa. Siyazi ukuthi isihlangu yisikhali sokuvikela esingasisiza empini ukuze kungaze kube nokuhlaselwa okufika kithi.
Emhlabeni wokomoya sidinga nesihlangu ngoba isitha siphonsa imicibisholo yokuthi, uma isifinyelela, ingasilimaza kakhulu.
Isihlangu sokholo sisetshenziswa kahle lapho ukholo lwethu luqina. Ukuze sithole lokhu kufanele sifunde izwi likaNkulunkulu, libambe ngekhanda, futhi okubaluleke kakhulu, silisebenzise.
Masikhumbule ukuthi ukukholwa kufana nomsipha othi uma ungakusetshenziswanga lapho kuyi-atrophies, masibonise ukholo futhi siwenze aqine ukuze asivikele kuko konke ukuhlaselwa umuntu omubi asiphonsela kona.
5: Isigqoko sokuzivikela sensindiso e-Armor of God
Isigqoko isigqoko sokuvikela ikhanda lesosha. Enye yezingcezu ezibaluleke kakhulu yazo zonke izembatho zempi.
Ingqondo yethu iyimpi yangempela futhi ilitshe elilula lesitha ngoba ihlasela ngqo emicabangweni yethu isenza singabinampilo noma isenze sikholelwe izinto ezingalungile ngokwezwi leNkosi.
Sisebenzisa isigqoko sokuzivikela noma isigqoko sensindiso lapho sikhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi sisindiswa ngokukholwa futhi lelo iqiniso elingaguqulwa.
Kufanele silwe silwe nemicabango emibi ngezwi likaNkulunkulu ngoba uyasithanda futhi usithethelele zonke izono zethu.
6: Inkemba yoMoya Engalweni kaNkulunkulu
Lapha umehluko omkhulu ngoba ezinye izikhali zingezokuvikela thina kodwa lokhu kubalulekile ngoba wadalwa ukuze sikwazi ukuhlasela amandla obubi. Ngenkemba singalimaza futhi sibulale isitha ngaso sonke isikhathi lapho sifuna ukungena khona.
Ngayo singazivikela futhi sikhanyise indlela esihamba ngayo, siqinisekile ukuthi inamandla nokuthi, uma sazi ukuthi siyisebenzisa kanjani, sizothola ukunqoba.
Ukuze siyisebenzise kahle inkemba yoMoya kumele sigcwaliswe izwi likaNkulunkulu ngoba inkemba iyasebenza uma sikhuluma izwi lakhe. Kubalulekile ukukwazi ukuyisebenzisa kahle kuzo zonke izimo nalapho sikwenza ngempumelelo ezimpilweni zethu.
Khumbula ukuthi ibhayibheli lifanana nemanyuwali yempilo futhi ukuze lamagama abe namandla kumele senze izinto ezikhonjiswe lapho.
Zonke izembatho zempi zokomoya zisebenza ngokukholwa futhi ziyaqiniswa phakathi womkhuleko.
Lapho sifunda izwi lakhe, kulapho ukholo lwethu luzoba khona futhi sizokwazi ukusebenzisa izembatho zempi ngokuphumelelayo. Umkhuleko uyisihluthulelo sakho konke, ukuhlangana noMoya oNgcwele kuyosihola ukuthi siphile ngokwentando kababa osezulwini.
Okthoba 12, 2019